Fitaterana rano any Bali ~ Journey-Assist - fantsona, sambo ho an'ireo nosy.
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Fitateram-bahoaka any Bali » Fitaterana rano ao Bali
Fitaterana rano ao Bali. Ferry sy sambo
Indonezia dia any amin'ny nosy 18, ka tsy misy zavatra hafahafa amin'ny hoe any Bali sy any amin'ny faritra hafa amin'ity firenena ity, novokarina tsara ny fitaterana rano.
Ny seranan-tsambo lehibe indrindra any Bali - Benoa
Port Port Bai
Toerana malaza sy ny fividianana tapakila
Mikaroka sy mividy tapakila ferry
Ferry na sambo
Orinasa mampiseho sambo any Bali
Sambo gili gili
Mihetsika ny rano manga
Ny seranan-tsambo lehibe indrindra any Bali - Benoa (Benoa)
Seranan'i Benoa any Bali
Ny sambo sy ny sambo dia miala amin'ny seranan-tsambo mankany amin'ny toerana samihafa amin'ity nosy ity sy any amin'ny nosy hafa. Ny serivisy amin'ity seranan-tsambo ity dia ampiasain'ny sambo sambo ihany koa mankany Bali.
Kely ny seranan-tsambo ary tsy afaka mahazo liners lehibe, ka ny mpandeha avy amin'ny tsipika cruise dia atolotra ho an'ny seranana amin'ny alàlan'ny sambo malefaka.
adiresy: Jalan Dermaga II, Pedungan, Kuta Selatan, Kota Denpasar, Bali, Indonezia
Tranonkala: https: //www.pelindo.co.id/
Tondroo amin'ny sarintany ho an'ny fanamoriana: https: //goo.gl/maps/KATAF6cEosXsoyB46
Padang Bai Pier (Padang Bai Port)
Port Padang Bai any Bali
Misy seranana kely kokoa - Padang Bai. Any atsimoatsinanan'ny Nosy no misy azy. Izy io dia toerana iray hanombohana sambo sy sambo ho an'ireo nosy manakaiky an'i Bali ary eo anelanelan'ny lakan'i Bali.
Address: FG85 + 9R Candi Dasa, Nyuh Tebel, Kabupaten Karangasem, Bali, Indonezia
Tondroo amin'ny sarintany ho an'ny fanamoriana: https: //goo.gl/maps/xeFzVLcKjCZ5sZVs7
Toerana malaza indrindra ary mividy tapakila amin'ny Internet
Gili sy Lombok - nosy akaikin'ny Bali, malaza amin'ny mpizaha tany. Afaka milomano amin'izy ireo ianao amin'ny fividianana tapakila amin'ny tranokalan'ny orinasam-pifandraisana eo an-toerana. Na hifandraisa amin'ilay malaza 12Go agregatorMampiasa izay ahitanao sy mividy tapakila an-tserasera ho an'ny karazana fitaterana, anisan'izany ny sambo misy ferry.
Fandaharana Ferry mankany Bali
Eto ambany ianao manana fahafahana hahita ny fandaharam-potoanan'ny ferry ao Bali, ary koa tahiry toerana ho an'ny tenanao.
Ferry mankany Bali
Raha ny momba ny safidy eo amin'ny sambo sy sambo, dia tokony marihina fa miadana ny safidy voalohany. Ny fampiononana amin'ny ferry dia matetika tsy ampy.
Ny sambo dia mety sy haingana. Azonao atao ihany koa ny manaiky ny fivahinianao manokana miaraka amin'ny mpivarotra tsy miankina. Ho an'ny vola fanampiny dia afaka mitondra fiara na scooter ianao.
Sambo sambo hafa ao Bali
Raha ampitahaina, ny dia avy any Bali mankany amin'ny nosy akaiky indrindra dia maharitra 1,5 ora amin'ny sambo haingana na hatramin'ny 5 ora amin'ny ferry.
Ankoatra ny hafainganam-pandeha ambany dia tsy mahazo aina ny fantsom-pifandraisana, matetika dia nanjaka tamin'ny fahatsorana izy ireo ary matetika ny fofona manintona.
Orinasa maneho ny fitaterana rano (sambo) any Bali
Sambo sambo Gili Gili Fast Bot
Manao ny dia any amin'ny nosy Lombok sy Gili ny orinasa. Amin'ny tranokala ofisialy dia afaka mametraka tapakila sambo ianao.
Tranonkala ofisialy: https: //www.giligilifastboat.com/
Peramatur dia mikarakara fitsangatsanganana sy fitsangantsanganana mankany Lombok sy Gili. Azonao atao ny mandray sambo ny orinasan'ity orinasa ao Bali ao Kut, Ubud, Sanur, izay iankinan'ny sambo mankany Padang Bay, ary avy any mankany amin'ny nosy hafa.
Amin'ny tranokala ofisialy dia afaka mametraka tapakila sambo ianao.
Tranonkala ofisialy: https: //www.peramatour.com/fastboat
Orinasa iray ahafahanao milomano amin'ny teboka toa an'i Gili Trawangan, Teluk Code ary Gili Air. Misy ny famindrana avy any Kuta, Legian, Sanur, Denpasar, Seminyak, Nusa Dua, Jimbaran ary Ubud. Mety ho any Benoa sy Padang Bay ny fandefasana sambo.
Ao amin'ny tranokala ofisialy dia afaka mametraka fitsangatsanganana sambo ianao amin'izay làlana ilainao.
Tranonkala ofisialy: https: //bluewater-express.com/